Warshadda Cudurrada Xayawaanka - Soosaarayaasha Cudurrada Xayawaanka Shiinaha, Badeecado
Qalabka baaritaanka cudurka PCR ee qandhada doofaarka ee Afrika
Qalabkani wuxuu adeegsanayaa waqtiga dhabta ah habka loo yaqaan 'PCR fluorescent PCR' si loo ogaado DNA-da fayraska qandhada doofaarka ee Afrika (ASFV) ee qalabka cudurada unugyada sida qumanka, qanjidhada qanjidhada iyo beeryarada iyo qalabka cudurrada dareeraha ah sida tallaalka iyo dhiigga doofaarrada.
Qalabka Feeraska Qandhada Doofaarka ee RT-PCR
Qalabkani wuxuu adeegsanayaa habka waqtiga dhabta ah ee loo yaqaan 'fluorescent RT-PCR' si loo ogaado RNA ee fayraska qandhada doofaarka (CSFV) ee qalabka cudurada unugyada sida qumanka, qanjidhada qanjirada iyo beeryarada iyo qalabka cudurrada dareeraha ah sida tallaalka iyo dhiigga doofaarrada.
Fayraska Cudurka-iyo-afka fayraska baaritaanka RT-PCR
Qalabkani wuxuu adeegsadaa waqtiga dhabta ah ee laydhka dhaadheer ee RT-PCR si loo ogaado RNA ee cudurka cagaha iyo afka (CSFV) ee ku jira qalabka cudurada unugyada sida qumanka, qanjidhada qanjidhada iyo beeryarada iyo qalabka cudurrada dareeraha ah sida tallaalka iyo dhiigga doofaarrada.
Nooca loo yaqaan 'Porcine Circovirus' oo ah nooca baaritaanka PCR
Qalabkani wuxuu isticmaalaa habka dhabta ah ee loo yaqaan 'PCR fluorescent PCR' si loo ogaado RNA-ga nooca loo yaqaan 'Porcine circovirus type 2 (PCV2)' ee qalabka cudurada unugyada sida qumanka, qanjidhada qanjidhada iyo beeryarada iyo qalabka cudurrada dareeraha ah sida tallaalka iyo dhiigga.
Fayraska faafa cudurka faafa ee loo yaqaan 'Porcine' cudurka faafa ee loo yaqaan 'RT-PCR'
Qalabkani wuxuu adeegsanayaa waqtiga dhabta ah ee loo yaqaan 'fluorescent RT-PCR method' si loo ogaado RNA ee fayraska shuban-biyoodka faafa ee loo yaqaan 'Porcine epidemic shuban virus (PEDV)' ee qalabka cudurada unugyada sida qumanka, qanjidhada qanjidhada iyo beeryarada iyo qalabka cudurrada dareeraha ah sida tallaalka iyo dhiigga doofaarrada.
Qalabka fayriska taranka ee 'Porcine' iyo neefsashada cilladda neefsashada ee 'RT-PCR Detection Kit'
Qalabkani wuxuu adeegsadaa waqtiga dhabta ah ee loo yaqaan 'fluorescent RT-PCR' hab lagu ogaanayo RNA-da 'Porcine taranka iyo fayraska cilladda neefsashada qalabka ogaanshaha aaladda nucleic acid (PRRSV) ee qalabka cudurada unugyada sida qumanka, qanjidhada qanjidhada iyo beeryarada iyo qalabka cudurrada dareeraha ah sida tallaalka iyo dhiigga doofaarro.